मायामी, हामी र पानीजहाज
‘विदेशी हाइहाई स्वदेशी कुना लगाई’
राप्रपा ‘जनआन्दोलन’मा किन ?
नेपालको वर्तमान अवस्था र स्थायी शान्तिको बाटो
घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 1 year ago March 7, 2018
– माइकल स्पेन्स
अहिले विश्वमा अभाव र संकट सामना गरिरहेका अर्थतन्त्र र समाजको कमी अवश्य छैन तर सकरात्मक गइरहेका दिर्घकालीन प्रवृत्तिलाई ओझेलमा पार्न दिनुहुन्न । यो अनुचित नैराश्यताको निवारणको उपाय बडो ब्यवहारिक छ– वैज्ञानिक अनुसन्धान र सामाजिक ऐक्यबद्धताद्वारा सृजित प्रभावकारी र तथ्यपरक नीतिको निर्माण ।
तथ्य र यसको ग्रहणबोधबीच फरक हुनुमा धेरै तत्वले भूमिका खेलेका हुन्छन् । जसमध्ये एक मानिसमा स्वभावतः रहेको पूर्वाग्रही सोच पनि हो । एउटा यस्तो पूर्वाग्रह ‘आशाको भिन्नता’ हो – मानिसहरु अरु मानिस वा समाजको परिस्थितिभन्दा आफ्नोप्रति बढी आशावादी हुन्छन् । अर्को कारक तत्वलाई नोवेल पुरस्कार विजेता डेनियल कानेमन र उनका सहलेखक मनोवैज्ञानिक आमोस ‘उपलब्धता अनुरुप अनुमान’ भन्छन् । यस अनुसार मानिसहरु जति सजिलै उनीहरुका विचारमा उदाहरण आउँछन्, त्यही अनुरुप घटनाहरुका आवृत्तिको अनुमान लगाउँछन् ।
सकारात्मक वा नकारात्मक जे भए पनि आर्थिक प्रवृत्तिबारे समाजको बुझाई केही हदसम्म आर्थिक नीतिमाथि उसको प्रतिकृयाले दर्शाउँछ । नीतिनिर्माताले कुनै विशेष क्षेत्र वा खण्डमा हुन पुगेको नोक्सानीलाई सम्बोधन गरेनन् भने त्यसले असन्तुष्टी र सामाजिक विभेद निम्त्याउँछ र त्यो आर्थिक कारबाहीप्रति नकरात्मक सोच हुन पुग्छ ।
विकसित देशहरुमा विश्वव्यापिकरणले श्रम बजार र आय वितरणमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएका छन् । आर्थिक गतिविधीलाई जुन तवरले ‘आर्टिफिसिअल इन्टेलिजेन्स’ र ‘रोबोटिक्स’ले सहयोग गर्दैछ सो चलिरहनेछ र यी परिवर्तन अझ तीब्र हुनेछन् । संसारभर यी आर्थिक र प्राविधिक शक्तिहरु मुलुकहरुका सरकारका नियन्त्रण क्षमताभन्दा बाहिर जाँदैछन् र सरकारका नीतिगत क्षमता माथि प्रश्न उठ्दैछन् ।
यस कुरालाई हालैको ‘न्युयोर्क टाइम्स’ को एउटा लेखले पुष्टी गरेको छ । सो लेखमा युरोपेली कमिसनको एउटा सर्भेलाई उद्धृ्रत गरिएको छ । जसअनुसार ८० प्रतिशत स्वीडिस नागरिकहरुले रोबोट तथा ’आर्टिफिसिअल इन्टेलिजेन्स’ बारे सकारात्मक बिचार राखेका छन् भने अर्को तिर पिउ रिसर्च सेन्टरको सर्भे अनुसार ७२ प्रतिशत अमेरिकीहरु भविश्यमा रोबोट र कम्प्युटरले मानिसलाई रोजगारीमा बिस्थापित गर्लान् भन्ने कुरामा चिन्तित देखिन्छन् ।
९अर्थशास्त्रमा नोवेल पुरस्कार विजेता माइकल स्पेन्स न्यु योर्क विश्वविद्यालयको ‘स्टर्न स्कूल अफ बिजिनेस’का प्राध्यापक, ‘काउन्सिल अफ फरेन रिलेसन्स्’ का सम्मानित भिजिटिङ फेलो, स्टान्फोर्ड विश्वविद्यालयको ‘हुवर इन्स्टिच्युट’ का सिनियर फेलो, हङकङको ‘एशिया ग्लोबल इन्स्टिच्युट’ का सल्लाहकार बोर्डको सहअध्यक्ष र ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम ग्लोबल एजेण्डा काउन्सिल अन न्यु ग्रोथ मोडल्स’ का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ ‘इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन अन ग्रोथ एण्ड डेवलप्मेण्ट’का पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ ।
(अनुवादः एकराज पाठक)